Ogaden News Agency (ONA) – Shacabkii Itobiyana gaajo u dhamaanayaa Meles-na Taankiyo kale ayuu dalbaday
Shacabkii Itobiyana gaajo u dhamaanayaa Meles-na Taankiyo kale ayuu dalbaday
Mucaaradka Itobiya ee ka soo horjeeda maamulka Wayaanaha ayaa waxay aad ula yaaban yihiin wararka sheegaya inuu KT Meles ka dalbaday dalka Ukraine 200 oo Taankiga nooca T72 sida uu qoray wargays ka soo baxa dalkaa oo yidhi wuxuu ku bixin doonaa Taankiyadaa lacag gaaraysa 100 malyan oo Doolar. Mucaaradka ayaa isweydiiyay dadka lagu difaacayo Taankiyadan iyagoo ku tilmaamay in lagu difaacayo un kooxda dhiigyacabka ah ee Wayaanaha.
Warar kale ayaa iyagu tibaaxaya in hubka ay Itobiya ka soo iibsanayso dalka Ukraine lagu qiyaasay qiimahiisa 1bilion oo Doolar, kuwaasoo isugu jira sawaariikh iyo Taankiyo iyo agab kale oo ciidanka ah. Hubkan ayay khubarada ku tilmaameen inay Itobiya u gadanayso colaada u dhexeyas iyaga iyo dalka Ertreeya iyo dagaalada kaga socda Ogadenya oy ku tilmaameen khubaradaa inuu dhiigbax ku yahay Itobiya ay qarsanayso.
Taariikhda laguma hayo nidaam gumaysi oo lagu difaacay hub iyo ciidan. Waxaan ogsoonahay gumaysiyadii reer Yurub ee maal iyo ciidanba ka badnaa Itobiya ugu dambayntii lagaga adkaaday dagaaladii gobanimadoon. Sidoo kale maamulkii Mingisto oy taageerayeen isbahaysigii xooga badnaa ee Warsaw ay afka dhulka u dareen jabhadihii ka soo horjeeday ee EPLF iyo TPLF. Sidaa daraadeed hub urursiga Meles waxba kama duwana kuwii ka horeeyay, hubka uu soo iibsanayo umbaana CWXO hub u ah.